Ngisho nasezikhathini zasendulo, okhokho bethu babebazi izindawo ezizuzisa uju. Ekhaya, bangakwazi ukunquma ngokungaqondile ikhwalithi yalo mkhiqizo. Ngaphandle koju, kunzima ukuphatha. Cishe cishe wonke umndeni. Uju, ngokwalo, luwumkhiqizo ohlukile. Le mithi, ukwelapha, isithako esihle sokubhaka, kanye nesithako esikhulu sazo zonke iziphuzo ezidakayo. Kusukela uju kunokwenzeka ukulungiselela amasonto amakhemikhali nama-creams. Indlela yokunquma ikhwalithi yobusi ekhaya, uzofunda kulokhu okushiwo.
Iyini inyosi ecebile kangaka ewusizo?
Abaningi bethu abasoze bacabange ukuthi lokhu kudla kungumcebo wamavithamini nezinto eziphilayo ezisebenzayo ezidingeka kakhulu emzimbeni. Phakathi naleso sikhathi, zonke lezi zinto eziwusizo zitholwa cishe ngu-100%. AmaMedics athola ukuthi uju nge-plasma yegazi unomumo ofanayo kakhulu. Amaphrotheni aqukethe kulo mkhiqizo ahileleke ngokuqondile ekwakheni ama-enzyme namahomoni, futhi asebenze njengento yeplastiki emzimbeni. Uju luphakamisa izinga le-hemoglobin egazini, lusiza ukumuncwa kwe-calcium emzimbeni, luvuse isimiso somzimba sokuzivikela, futhi lukhulise ubungqabavu. Zonke izinhlobonhlobo uju ziwusizo kakhulu njengezisebenzi eziqinisa.
Uju lunempahla eqinile ye-bactericidal ne-antioxidant. Yingakho ubusi kufanele buqedwe njengokudla kwabakhileyo emadolobheni amakhulu. Ngisho noma usuku ngalunye udla isipuni esisodwa salomkhiqizo omuhle, khona-ke kuthuthukisa ngokucacile umsebenzi wezinhliziyo, ukulala, ukuvuselela ukudla nokucindezela kwegazi, ukuthuthukisa isimo sengqondo nokuqina. Ngaphezu kwakho konke lokhu, uju unomphumela wokutholisa isimiso sezinzwa eziphakathi.
Uju ngumkhiqizo ophezulu wekhalori. Ngama gramu angu-100 alo muthi uqukethe endaweni ethile engama-calories angu-330-335. Uma uzohola indlela yokuphila yeselula, lawa makhalori ngeke agcinwe emzimbeni. Amandla avela uju ahlanganiswa esibindi, bese anikezwa ngezigaba ezihlukene, lapho kuzodingeka, isibonelo, ngaphansi kokucindezeleka ngokomzimba nangokwengqondo. Kubadlali abaqeqesha ngenkuthalo, kuyoba usizo ukusebenzisa uju ngesamba sika 100-150 amagremu ngosuku. Kubantu abahamba kancane, amathisipuni amathathu uju ngosuku ayokwanela. Uju oludliwa nsuku zonke luzosiza ukugcwalisa umzimba ngamandla nezakhi.
Amavithamini nezinto eziphilayo ezisebenzayo ziqukethwe uju.
Ukwenziwa koju iodini.
Umkhiqizo uqukethe ama-enzyme ewusizo, okusiza ukusheshisa umzimba.
Iqukethe izinto eziningi, eziningi zazo i-fructose ne-glucose.
Ukwakhiwa kuhlanganisa ama-acids aphilayo, njenge-lactic, oxalic, tartaric, malic, citric.
Iqukethe inani elikhulu lamaminerali: i-sodium, i-magnesium, insimbi, i-calcium nezinye.
Icebile amavithamini PP, B2, B6, C, K, E, N. Iqukethe i-folic acid.
I-meadow honey iqoqwe izinyosi ezivela ezitshalweni ezihlukene, ngakho-ke kubhekwa njenge-allergenic kakhulu.
Ubusi be-lime - obumnandi futhi obubala, bubhekwa njengebanga elihle lezinyosi.
I-Acacia - uju obizayo ne-elite.
Uju lwe-Donnick - lunambitheka omuhle futhi olubucayi, umbala obala obala.
Uju olunezinyosi - lunomthunzi obala ohlaza okwesibhakabhaka.
I-fazelium uju - ibhekisela ezinhlotsheni eziphezulu.
I-Buckwheat - ine-shades emnyama: kusuka ophuzi obumnyama ibe mnyama omnyama.
Uju lwe-Chestnut luyizinhlobonhlobo ezimnandi kakhulu, unomusa wokuqala nephunga elimnyama, umbala omnyama.
Indlela yokunquma ikhwalithi yomkhiqizo ekhaya?
Kubalulekile ukuba ukwazi ukucacisa ikhwalithi yobusi, ukuze ungathengi inkohliso. Ungakwenza lokhu ngokushesha ngaphambi kokuthenga, noma ekhaya.
Ezingeni eliphansi lomkhiqizo, izinyosi azikho iphutha. Bulala abantu abasebenza ngqo kwizinyosi. Abalindi kuze kube yilapho izinyosi zihamba ngezinkulungwane zezimbali. Abenza izinyosi benza lokhu kudla ngokushesha ngangokunokwenzeka. Benza lokho okulula kakhulu. Eduze emthanjeni ufake ipuleti yamanzi amnandi. Izinyosi ezikhohlisiwe ziqala ukukhiqiza uju kusuka kule siraphu. Lo uju ubizwa ngokuthi ushukela. Umkhiqizo ophezulu kakhulu wekhalori futhi awunamsebenzi.
Thola ukuthi kunzima kangakanani uju wekhwalithi, ikakhulukazi uma kusha. Kodwa nokho ungazama ukwenza ngezindlela ezimbalwa ezilula.
Uma kuqhathaniswa nomkhiqizo wemvelo, uju ushukela uketshezi oluthe xaxa. Uju lwezemvelo alugeleza kusuka ku-spoon, lulimala kalula kuso futhi isilayidi siwela phezu kwe-saucer. Unokuvumelana okuningi kwe-viscous.
Ukuze unqume izinga lezinyosi, lingashiswa. Uju lwezemvelo luyoba nokunambitheka okunamandla futhi iphunga elimnandi. Uju lwe-Sugar luyoba ngaphandle kokunambitha futhi ngaphandle kokuhogela.
Ikhwalithi yezinyosi e-candied ingachazwa ngale ndlela elandelayo: esikhwameni ugaye ihlumela lomkhiqizo. Uma ubona ukuhlangana okumhlophe, okumhlophe - awukwazi ukungabaza: ngaphambi kwakho komkhiqizo wemvelo. Ngenkohliso kukhona izinhlamvu ezingenayo insoluble. Uma usebenzisa lokhu okuthakazelisayo itiye, uju ushukela uzoshiya amafu amnyama obukhulu kanye turbidity.
Ukuze unqume ukuthi kukhona ukungcola okwenziwe uju, uzodinga amanzi angcolile futhi u-5% we-tincture we-iodine. Engeza amaconsi ambalwa e-iodine emanzini acwecwe ngunyosi. Uma ikhambi liphenduka okwesibhakabhaka, kusho ukuthi isitashi kanye nofulawa kuxubene uju.
Ukuze ukwazi ubukhulu boju, kubalulekile ukuyiqeda emanzini afudumele. Kuzokwazi ukubona indlela ukungcola okuyiyokwenziwa ngayo kuyokwenzeka noma kulungiswe. Amancane, amakhulu kakhulu omkhiqizo.
Uju ngumkhiqizo we-allergenic. Lokhu okumnandi kufanele kusetshenziswe ngokuqapha okukhulu izingane ezibhekene nokuzizwa kwemizwa. Ungayifaki ngokuphelele le mkhiqizo kusukela ekudleni komntwana. Zama ukumnika ingane uju oluncane kuqala. Uma kungekho ukungezwani, khona-ke umthamo ungancipha kancane kancane.
Indlela yokunakekela ingadi yezithelo
Futhi uhlala kuphi imali
UKsenia Sobchak ngokuziqhenya ubonisa isifuba sakhe ngemuva kokubeletha
Ingulube nge-saffron sauce
Amaphikisho okwelashwa ngokuxhomeka kotshwala
Umculi odumile uGarik Martirosyan
Tikka masala nge-rim basmati
Abantu abakhulu bemboni yomhlaba wonke